असाड १, २०७४
यदि देश र जनता कै लागि राजनीति गरेको हो भने बन्द र हडताल किन र कसकालागि? के बन्द र हडतालबाट जनताखुशी हुन्छन् ? के जनताले चाहेको यहीहो ? हैन भने कुनकुल देउतालाई खुशीपार्न सडकमा तान्त्रिकले गरेको जस्तो गालीको मन्त्रोच्चारण गरेर सार्वजनिक सम्पतिको वलिदिइदैंछ । जनताले तिरेको करको पैसाबाट बनेको भौतिक संरचनाहरुलाई जनताकै अधिकारकानीम्ति लडेको र राजनीति गरेको भन्दै पछिल्ला केहीवर्ष देखि देशमाजुनप्रकारको अराजक हठ मौलाएको छ त्यसले देशको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्हलगाएको छ । यसले भलाइ कसैको गर्दैन तर यो कसैले बुझ्न सकेका छैनन् या बुझेर पनिअन्धो र बहिरो भएर बसेका छन् ।
जब देखि हाम्रो देशलाई निर्वाचनको रोगले संक्रमण गरेको छ तबदेखि यो रोगबाट संक्रमितविभिन्न राजनीतिकदल र नेताहरुमा अनेक प्रकारको लक्षण देखिनथालेको छ ।
कोहीनिर्वाचनमाभागलिने खुशीमाचाहिने भन्दा बढी नै उत्साहितभएका छन् भने कोहीचाँहि कैकेयी जस्तो कोप भवनमा रिसाएर बसेका छन् । अबकसले कसलाई मनाउने ?
बालहठ भएपो चकलेट, आइसक्रिमदिएर चन्द्रमाको लोभ देखाएर फकाउनु ?यहाँ त व्यस्कहरु नै हठ गरिरहेका छन् त्यो पनि राजहठ । अब राजनीतिगर्नेहरुले गर्ने पनि राजहठ नै हो र यसैको माध्यमबाट आफ्नामागहरु पूरा गर्ने हो ।
तर यो राजहठ सिंहदरवार र संसद वरिपरि नगरेर र नदेखाएर सडकमा टायर बालेर, विद्यालय र कलेज बन्द गरेर, बजार बन्द गरेर, तोडफोड गरेर, चक्काजाम गरेर अनिआन्दोलन र विरोध गरेर गरिन्दै छ ।
यो राजहठले अबबिस्तारै अराजक हठको रुप लिदैं छ ।
राज्यले बेलैमा संविधान संसोधननगर्दा, मधेशीहरुको मागलाई संवोधनगर्न नसक्दानिर्वाचनको मुखका देश युद्ध भूमि जस्तो बनेको छ । र यस युद्ध भूमिमा सेनापतिहरु आाफ्ना तिकडम र साम, दाम, दण्ड, भेद नामकाहतियारहरुलाई तिखार्नमाव्यस्त छन् ।
के थाहाकुन बेलाकुन अस्त्र, शस्त्रको प्रयोग गर्नु परोस् ?आखिरमा सबैलाई जसरी पनिचुनावजित्नु छ । र यसकालागि राजहठ जस्तो राम्रो अस्त्र अरु के नै हुन सक्छ र ?
विभिन्न राजनीतिकदल र तिनका नेताहरु देश र जनताकालागि राजनीति गरेको र निर्वाचनमाभागलिएको भन्छन् तर तिनै जनतालाई आफ्नो राजहठमा घान बनाउँछन् ।
यदि देश र जनता कै लागि राजनीति गरेको हो भने बन्द र हडताल किन र कसकालागि? के बन्द र हडतालबाट जनताखुशी हुन्छन् ? के जनताले चाहेको यहीहो ? हैन भने कुनकुल देउतालाई खुशीपार्न सडकमा तान्त्रिकले गरेको जस्तो गालीको मन्त्रोच्चारण गरेर सार्वजनिक सम्पतिको वलिदिइदैंछ ।
जनताले तिरेको करको पैसाबाट बनेको भौतिक संरचनाहरुलाई जनताकै अधिकारकानीम्ति लडेको र राजनीति गरेको भन्दै पछिल्ला केहीवर्ष देखि देशमाजुनप्रकारको अराजक हठ मौलाएको छ त्यसले देशको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्हलगाएको छ ।
यसले भलाइ कसैको गर्दैन तर यो कसैले बुझ्न सकेका छैनन् या बुझेर पनिअन्धो र बहिरो भएर बसेका छन् । यो अराजकताको आगोमापनिउनीहरुको घरमाचिल्लो रोटी पाकेकै छ । आफु सुरक्षित बसेर अरुलाई आघात पार्ने र जनतालाई मार्ने खेल कहिलेसम्म?
चुनावमा उठ्न र जित्नकालागिजुनसुकै हतकण्डा पनिअपनाउने र दलपनिबदलिन सक्नेहरु राजनीतिकदलमाहावीहुदैंगएका छन् ।
पैसाको नजरानादिएर पार्टीमाआफुले भने जस्तो पद र चुनावमा टिकट पाउनकालागि अनेक तिकडम गर्नेहरुले गिरगिटलाई पराजितगरिरहेका छन् । जंगलीगिरगिटको त रगँबद्लिने आफ्नो प्राकृतिककला र आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेको छ ।
जबदेखि मान्छेहरु अझत्यसमापनि राजनीतिगर्ने दलका नेताहरुको दल र सिद्धान्त बदलु रवैया देख्दात्यो बिचरो गिरगिट पनिआश्चर्य चकित छ ।
अघिल्लो संविधान सभाचुनावमा एउटा दलबाट सभासदमा उठेर हारेको मान्छे अहिले स्थानीयतहको चुनावमाअर्को दलबाट मेयरको टिकट पाएर प्रकट भएको छ । टिकट दिने पार्टीले आफ्नाथु्रपै मेयर पदकाआकाँक्षी नेता र कार्यकर्ताहरुलाई लत्याएर पैसाको प्रभावमा कसैलाई काखा त कसैलाई पाखागर्दैछ ।
अनि संसद र सडकमा यही राजनीतिकदल र यसका नेताहरु आफुलाई राष्ट्रियताको हिमायती ठान्छन् । आफु र आफ्नो दल देशप्रेमी र राष्ट्रवादी बाँकी अरु दलतिनका नेता र जनता सबै देशद्रोही र अराष्ट्रवादी ।
चिनियाँचश्मालगाएर आफ्नो विरोध गर्ने जति सबैलाई भारतीय देख्ने यो कुनै दलविशेषको व्यवहारले नै आज यो अराजकतानिम्त्याएको हो ।
जबसिधातरिकाले आफ्नामागहरु पूरा भएनन् तब बागोँतरिकाअर्थात राजहठ गरे ।
यद राजहठ गरेर चारदिन सम्मबन्द र हडताल गर्नेहरु देश विरोधीहुन् भने तिनलाई त्यसो गर्न उक्साउनेहरु चाँहि के देशप्रेमीहुन् त ? संविधानजारी गरेको पनिदुई वर्ष हुनथालिसक्यो ।
त्यो बेलादेखि संविधानलाई आफ्नो मान्ननसकेर संसोधनको मागगरिरहेकामधेशीहरुलाई देशको शासन सत्ताले कहिले चिची त कहिले पापादिएर पकाउनखोज्यो ।
तर राज्यले यो बुझेनकिचिची र पापाखाएर यिनीहरु ऋघाइ सके । अबमधेश र मधेशीहरुलाई निकास र हलचाहिएको छ ।
संधै भोलि, भोलिभनेर टार्दै आएकाशासकहरुले यो बुझेनन् कित्यो भोलीकहिल्यै आउँदैन जबसम्मआआफ्नो स्वार्थ र हठको त्याग गरिन्दैन ।
नेपालकाशासकहरुको शुरु देखिको चिन्ताहो शासन सत्तामामधेशीहरुको पकड बलियो नहोस् ।
मधेशीबलियो हुनुको मतलबबन्द मुठ्ठीबाट बालुवाबिस्तारै खस्दै गए जस्तैखसहरुपनिकमजोर हुंदै जानेछन् । र कसलाई कमजोर हुन मन लाग्छ । सबै पद, पैसा र पावरले बलियो भएर अरुमाथिशासनगर्न चाहन्छन् । अहिले सम्मभएकै यहीहो ।
हिजोसम्ममधेशीहरु शिक्षितथिएनन् त्यसैले कमजोर थिए तर आजउनीहरु शिक्षित र जागरुक भएपछि आफु हेपिएको र दबिएको महसुस गर्न थाले ।
जब जागो तब सबेरा भने जस्तै अबजागिसकेकामधेशीहरुले आफ्नो हकमाग्दैछन् । तर रगँ, वर्ण, खानपान र व्यवहारमाआफुसँग अमिल्दो देखिएपछि तिनलाई कति सजिलैसितपारी पट्टिका मान्छे र छिमेकीभनेर आरोप लगाएर पन्छाउन खोजिदैंछ ।
यही देशमाजन्मेका तर रीतिथीति र संस्कारमा फरक भएकाहरुलाई उनीहरुको जन्म स्थानमाथिको प्राकृतिकहकलाई खोस्न खोजे पछि राजहठ गर्ने नै भए । मधेश आन्दोलन गरेर आन्दोलितभएको पूरै तराईलाई वाता गरेर उनीहरुको मागंको संवोधन र संविधानगर्ने भनियो तर भएन ।
पटक। पटक त्यस्तै आश्वासनदिइयो तर कार्यान्वयनगरिएन ।
स्थानीयतहको पहिलो चरणको चुनावमापनित्यस्तै भनियो तर मधेशीहरुको मागकाबिषयमा राज्यसत्ताकानमा तेल हालेर बसिरह्यो ।
जब, जब मधेशीहरुलाई यो देशको नागरिक सरह हक, अधिकार दिने कुरा उठ्छ तब, तब उनीहरुलाई अगिँकृत भनेर उनीहरुको मुखमा टेप टाँसिदिन्छन् ।
बिजयकुार गच्छेदार र शरतसिंह भण्डारी पटक, पटक मन्त्रीबनिसकेको उदाहरण दिएर मधेशीहरु पहाडे बराबरकै नागरिक भएको बताइन्छ । तर कुनै सीमान्तकृत जातिवा सीमावर्ति शहरमा बस्ने यो देशो दीनहीननागरिकलाई सोध्नु उसले कतिअधिकार पाएको छ यो देशबाट ।
यही देशमाजन्मे हुर्केकाबाउ, आमाको सन्तानभएर पनि जब उसको नागरिकताबनाउने पालो आउँछ तब उसलाई उसको बाउ, आमाको नागरिकताको आधारमानागरिकताको प्रमाणपत्र दिईंदैन ।
उसले आफ्ना छरछिमेकबाट सरजमिन गरेर यो प्रमाणित गर्नु पर्दछ कि उ यो देशको नागरिक हो भन्ने । के यही सब प्रकिया एउटा पहाडेको सन्तानले नागरिकताबनाउँदा पूरा गर्नु पर्दछ ?यदि पहाडेले पर्दैन भने रगँ र वर्णको आधारमामधेशीसँगयत्रो भेदभावकिन?किती मान्छे हैनन् ?
भारतीयमूलकादार्जिलिगेँ नेपालीप्रशान्ततामागँलाई लाखौं नेपालीकानागरिकले ईण्डियन आईडलमा एसएमएस गरेर भोट दिएर जिताउँछन् ।
तर आफ्नै देशमाजन्मेकीमारवाडी समूदायकीनीकिता चन्डकलेमिस नेपालप्रतियोगिताजित्दाउनलाई भारतीयभनेर गिज्याइन्छ र हेपिन्छ ।
दाजिैलिगँमा नेपालीभाषाकालागित्यहाँकानागरिकले गरिरहेको आन्दोलनमा सहीथाप्दैं त्यसमा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने र सबै नेपालीहरुले उनीहरुलाई समर्थन गर्नु आवश्यक छ ।
तर आफ्नै देशकामधेशीजनता दोयम दर्जाकानागरिक भएर आफ्नो अधिकारकालागिआवाज उठाउँदा र आन्दोलनगर्दा त्योचाँहिगलत र भारतले उचालेको भनेर विरोध गर्नुका साथै मधेशीहरुको आवाजदबाउने प्रयास गरिन्छ ।
आफु र आ सत्ताले गरेको जे पनि ठीक र अरुले गरेको सबै गलतमान्ने प्रवृतिशासकहरुमाहावी रहेसम्म देशमा यस्ता राजहठ वा अराजक हठ बेला, बेलामा भैरहन्छ । तर दुखको कुरा न यसबाट शासक पग्लिन्छन् ।
न मधेशका नेताहरुलाई यो आन्दोलनबाट कुनै हानी हुन्छ ।
ओखलतथा मुसलीे बीचको यो राजनीतिक खेलमाजनताचाँहिअन्न र घुन जस्तै पिसिदैं आएका छन् र अझै कहिलेसम्मपिसिने हुन कसैलाई थाहा छैन ? शायदमधेशीहरुको जन्मपिसिनैकालागिभएको हो ।